Sweatshirt → Kupfeka mbatya • nyanzvi P & M makomboni emakomputa
Shangupadyo nayo bhurugwa i T-shitsi, Ndiyo seti yekutanga yezvipfeko zvevashandi mumaindasitiri mazhinji. Mhando dzakasiyana dzemamodeli dzinowanikwa kubva kwatiri chitoro inogonesa kusarudzwa kwechigadzirwa zvichienderana neshandisirwo yadzo yekushandisa kana zvido zvemushandisi.
Sweatshirts ebasa uye zuva rega rega uine ako maficha
Iwo akapihwa mamodheru akagadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu, iro basa riri iro repamusoro soro rinokwanisika kushanda kwaro uye kudzivirirwa kubva kune yakaoma mamiriro ekunze.
Sweatshirts ndiwo anokosha michina yevamiriri vemaindasitiri mazhinji, incl. kuvaka, kugadzirwa kana kugadziriswa. Ivo vane chikwereti chekushandisa kwavo kwakasiyana siyana kune anoshanda zvivakwa - kunze kwekupa kudziya pamhepo kana kutonhora, ivo zvakare vanobvumidza yakawanda rusununguko rwekufamba kupfuura majaketi apo vachiwana zvipfeko zvakavanzika.
Isu tinopa mamodheru emwaka wese akagadziridzwa kune akasiyana mamiriro ekunze kana echimisikidzo anosvetuka echirimo kana matsutso nguva.
Tinokupa iwe mabhachi ebasa pamitengo yakasiyana zvichienderana nemodheru - kubva pazvinhu zvakakosha kusvika pakuwedzeredzwa nechinangwa chakakosha.
Iwo anowanzo kuve akagadzirwa ne polyester, iyo inopa kwakanyanya kupisa kwekudzivirira, uye nekudaro runyararo rwakawanda rwekufamba kupfuura rwekare mabhachi ebasa.
Pamusoro pezvo, mazhinji mamodheru ane akamira-kumusoro makorari ekudzivirira kwekushisa uye muhomwe dzinoshanda dzine zipi. Isu tinopa masweatshirt mune akasiyana mavara, ane marefu uye mapfupi maoko, pamwe nehunhu yambiro ine zvinhu zvinoratidzira.
Hembe dzinoratidza ichashanda zvakakodzera kuvashandi vemumigwagwa, vashandi vekuvaka kana avo vanoshanda kwasviba.
Shirts dzebasa makambani akadai Reis kana Stedman Yakagadzirwa nemicheka isingagone kushandiswa zvakanyanya.
Kuti tidzivirire zvinhu zvakafumurwa kubrasion, zvakakosha zvinhu zvekudzivirira zvakasonerwa mumamodeli akasarudzwa. Zvakare, mamwe masitayera akagadziridzwa nemhepo yekudzikisa kutuka panguva yekurovedza muviri kwakanyanya.
Mazhinji mamodheru ane akasununguka mawelt muchiuno uye mawoko kudzivirira kubva kukuvara kune zvakavanzika zvipfeko kana tsvina.
Zviri kutengeswa ndezvi: mabhachi emvere, majaketi ebasa, majasi epolypropylene, majaketi ekunyevera, majuzi.
Shirts dzebasa nezvakanyorwa zvinowanda nekuti zvakaenzana nefomu yakachipa yekushambadzira. Uine izvi mupfungwa, funga yemhando yepamusoro yekumaka nzira isingagadzirise kukuvara, kurasikirwa kwemavara uye yakanyanya kupisa tembiricha. Ndokusaka tichiikurudzira kuti ive yakasimba kuita kwako kombiyuta yemakomputa.
evarume vebasa masweatshirtmvere dzemurume dzinoshanda masweatshirtbvudzi rebasamabhachi ebasaAllegro basa sweatshirtmachena mabhachi ebasamasiketi ebasa evakadzima denim anoshanda majaketiengelbert strauss majaketi ebasajula basa mahembemajasi ebasa evarumeyakadzivirirwa mabhachi ebasainojekesa majaketi ebasaShirt dzekushandadehwe sweatshirtAllegro makushe emvere anoshandashirts ekushanda saiti: allegro.plsoftshell mabhachi ebasapfumbu dzebasa jaketimabhachi ekushanda ane hoodmashandiro ejuzi ane kudhindashanda sweatshirts pamwe neAllegro anodhindayechando majaketi ebasakudziya mabhachi ebasajula basa mahembeakasununguka masweatshirtmashandiro ejuzimabhachi ebasazvakachipa masutu masutumbatya dzekupfeka dzekushandira
4.9 / 5 ( 16 mavhoti )